Ahoana no fomba hanamboarana azy aorian'ny tolona: Dingana lehibe 9 tsy maintsy ataonao - Fifandraisana
Ahoana no fomba hanamboarana azy aorian'ny tolona ary atsaharo ny fifamaliana amin'ny fifandraisanareo
Matetika no sarotra ny mamorona aorian'ny fifamaliana ao amin'ny fiarahanareo.
Mety hitarika fanontaniana lehibe kokoa momba ny antony hiadianao hevitra amin'ny namanao izany.
Raha hitanao fa miady mafy amin'ny fifandraisanao ianao dia mety hisy olana ifotony tokony horesahinao.
Na dia zava-dehibe aza ny fananana zavatra itovizan'io olona miavaka io amin'ny fiainanao dia tsy misy olona maniry vady mitovy hevitra aminy amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Saingy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny adihevitra mahasalama sy ny adihevitra mahasosotra.
Raha fahita eo amin'ny fifandraisanareo ity farany ary tsy hainao ny mijanona tsy hiady hevitra dia mila mijery ilay sary lehibe kokoa ianao.
Hanolotra torohevitra momba ny fanamboarana sy hijanonana amin'izany izahay…
1. Omeo fotoana kely izy io
Ny fiezahana hamorona olona avy hatrany aorian'ny fifamaliana dia tsy handeha mihitsy.
aiza no hitondrako ny sipako amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Raha samy mahatsapa ratra na tezitra ianao, ny fampihavanana haingana dia mety hanamaivana ny fikorontanana voalohany, saingy tsy hamaha olana maharitra izany.
Hifampahery fotsiny ianareo ary hanome toky ny tenanareo fa milamina ny raharaha ary tsy ity no ady ity dia ny fahataperan'izao tontolo izao, na ny fifandraisanareo!
Raha te-hamaly olona aorian'ny ady dia mila fotoana ianao hampangatsiatsiaka sy hanodinana izay nitranga.
Ny eritreritsika sy ny fahatsapantsika aorian'ny fifandonana dia tsy taratry ny tena fihetsem-pontsika foana, ary matetika isika dia afaka manaratsy zavatra amin'ny fanandramana hamaha haingana ny fifamaliana.
Raha mbola mahatsiaro ho marefo ianao dia mety ho mailaka loatra ka hilavo lefona ary hiala tsiny noho ny zavatra tsy anao.
Raha mahatsapa fanesoana na fahatezerana ianao dia tsy ho malala-tsaina ka handre ny fanamarinana na fifonana ataon'ny hafa.
Ny fiheveranao diso hevitra aorian'ny ady hevitra dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fomba andehananareo miala avy eo, noho izany dia ilaina ny mifanatona rehefa samy nanana fotoana nilamina.
Izany hoe, aza avela ela loatra!
Tsy misy ratsy kokoa noho ny fahatsapana ho fifamaliana dia ‘ny farany’ satria mbola tsy naheno ilay olona hafa ianao.
Aza minia mampiandry ny olon-kafa - tsy rariny ny mampipetraka olona sy hatsembohana olona iray rehefa milalao ny fihetsem-pony ianao.
Isika rehetra dia nahavita azy io tamin'ny fotoana sasany - 'Hovaliako rahampitso mba ho fantatr'izy ireo fa sosotra aho' - fa fihetsika kely mitarika fifandraisana tsy salama izany.
Aleo kosa fantatry ny olon-tianao fa te hiresaka ianao, fa tsy tena vonona ianao.
Anjaranao mandra-pahoviana no andrasanao hanao izany. Ho fantatrao izay mahatsapa fa mety.
Tadidio fa samy hahatsapa ho mangirifiry ianao rehefa avy mifamaly, na iza na iza marina na diso.
2. Mifona - Raha mila izany ianao
Mifona dia iray amin'ireo fomba lehibe indrindra ahafahanao manamboatra azy io amin'ny olona iray.
Ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra nataonao dia zava-dehibe raha ny amin'ny fananana fifandraisana salama .
Mety hoe nanao zavatra ‘tsy nety’ ianao tokony miala tsiny noho - raha izany dia hazavao tsara fa azonao ny antony nahasosotra ny vadinao ny fihetsikao ary tapa-kevitra ny tsy hanao zavatra hafa indray.
Raha tsy tsapanao fa nanao zavatra tsy nety ianao dia zava-dehibe ny mahatakatra ny antony mahatonga ny olon-tianao hahatsapa ny fomba fanaovany zavatra ary hiasa manitsy ny fihetsikao na manampy azy ireo hamela ny tsy fahatokisan-tena manodidina ny hetsika nataonao.
Ohatra, raha manana namana mahatsapa fandrahonana ny vadinao ianao dia tsy tokony hahatsapa ianao fa mila miala tsiny amin'izany.
ianareo afaka miala tsiny amin'ny tsy fahazoanao ny fomba andanianao fotoana miaraka amin'izy ireo dia mety hahasosotra ny vadinao, fa mila mitady fomba izy ireo hahafahany mahazo aina amin'izany.
Tsy mbola nanao zavatra tsy nety ianao, saingy mazava ho azy fa misy olana raha miteraka ady be izany.
Handinika amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny famahana ireo karazana olana izahay avy eo.
3. Aza mitazona lolompo!
Mora ny miteny azy noho ny vita, mazava ho azy, fa ny tsy mitana lolompo no fomba tsara indrindra hamahana ny fifamaliana amin'ny vadinao.
Amin'ny fihazonana zavatra mahasosotra anao dia ampahafantarinao ny olon-tianao fa tsy namela azy ireo ianao noho izany.
Mety hiteraka olana lehibe kokoa eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany, izay mety hitombo haingana kokoa.
Amin'ny alalàn'ny fanekenao hamela sy handroso dia mifanaja ianareo ary maneho fa manome lanja ny fifandraisana ianareo.
Raha hitanao fa tsy azonao atao ny mamela ny zava-nitranga dia mety ho famantarana izany fa tsy izany no fifandraisana tsara indrindra tokony hanananao.
Ny fifampiraharahana no zava-dehibe, fa raha misy zavatra manelingelina anao amin'ny fotoana tsy ahafahanao mamindra izany fahatsapana izany dia mety mila miaina miaraka aminao eo mandrakizay ianao.
Diniho raha ity no mpiara-miasa mety aminao - raha misy izy ireo, tokony ho afaka handamina ireo olana sy hamaha azy ireo amin'ny ankapobeny ianao, na dia tsy tonga tampoka aza izany.
4. Mitadiava outlet
Ka, nifamaly ianao, nifanome toerana kely ary nifona, inona ny manaraka?
Fantatray fa nilaza izahay fa tsy tokony hitana lolompo amin'ny vadinao, fa mety mbola hahatsapa fahasosorana na fahatezerana ihany ianao.
Voajanahary izany, satria mirona amin'ny fifamaliana isika, na inona na inona tena izy.
Efa nahita ve ianao fa matanjaka tanteraka aorian'ny ady amin'ny zavatra ambany noho ny famoahana ny fako?
Azo antoka fa nifindra tamin'ny heviny ianao fa tsy sosotra amin'ny mpiara-miasa intsony, fa tsy afaka loatra ahintsano ny hatezerana avy amin'ny hetsika ady hevitra fotsiny.
Amin'io fotoana io no ilanao fivoahana mahasalama amin'ny fihetsem-po sisa tavela, somary tsy misy dikany.
Azonao atao ny misafidy izay mety aminao indrindra.
Ho an'ny olona sasany, ny fanoratana ny zavatra tsapany dia afaka manampy tokoa. Manome anao fahatsapana mazava kokoa amin'ny fahitana ireo zavatra voasoratra arakaraka ny ahitanao azy ireo amin'ny tanjona kokoa.
Ho an'ny sasany, mila famotsorana ara-batana mba hikirakira farany sy hanalana ireo fahatsapana fihenjanana na fahatezerana tavela ao aoriana.
Mitehafa amin'ny gym, mandehana mihazakazaka, na mitodiha any amin'ny kilasy yoga - tena hanampy anao hivoaka ny lohanao izany, ary ireo endorphins avoakan'ny vatanao amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena dia hampitombo ny toe-tsainao.
Arakaraka ny fahatsapanao ho tsara ara-batana no hahatsara ny toe-tsainao ary hihatsara tanteraka ny fisainanao.
Raha miresaka momba ny fisainana dia azonao atao ny manandrana mampiasa saina.
Betsaka ny rindranasa na horonantsary YouTube azo atolotra izay manolotra fotoam-pianarana misaintsaina.
Azonao atao ny misafidy karazana fisaintsainana tianao hosedraina, manomboka amin'ny torohevitra momba ny fifandraisana ka hatramin'ny fampitoniana amin'ny ankapobeny.
Ny fakana an'ity fotoana ity hangatsiatsiaka tokoa dia hanampy amin'ny fanesorana ireo fihetseham-po na eritreritra ratsy avy amin'ny atidohanao, hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa sy hamorona haingana, ary ho lava kokoa!
ahoana no hahalalana raha misy ankizivavy tia anao
Salama ve ny fifandraisana? (+ Impiry miady ny mpivady?)
Fa maninona no sarotra ny fifandraisana?
Mpanapaka fifanarahana 20 tsy tokony hiomanana amin'ny fifampiraharahana
Ny famahana ny adinao dia asan'olon-droa, noho izany dia samy mila miezaka manatrika izany ianareo roa.
Ny ady sasany dia mety mahasoa amin'ny fanamafisana ny fifandraisanareo, koa aza mieritreritra ny ratsy indrindra ary mieritreritra fa voaozona ianao!
Amin'ny firesahana miaraka, dia ho hitanao ny antony nahasosotra anao na ny olon-tianao.
fihainoana no teny fanalahidy eto!
Aza miresaka fotsiny hoe ahoana ianareo mahatsapa, fa miomàna hihaino ny lafin'ny vadinao amin'ny tantara.
Ny fanaovana an'io dia mampiseho azy ireo fa miahy ianao ary mahatsapa ny zavatra tsapan'izy ireo.
Ho hitanao koa angamba ny momba azy ireo.
Tandremo ary omeo azy ireo ny fanajana ilainy, amin'ny alàlan'ny mason'ny maso sy ny valiny mifanaraka amin'izany.
Anontanio azy ireo ny zavatra tsapany momba ny zavatra, ny antony eritreretin'izy ireo fa nitranga izany, sns.
Raha miady hevitra momba ny zavatra mitovy hatrany ianao dia izao no fotoana handinihana lalina sy handinihana ny tena olana ao ambadiky ny resaka adinao.
Aza miditra amin'ny fiarovan-tena…
Mety hilaza zavatra vitsivitsy izay tsy voatery hitovizanao hevitra izy ireo, fa ity fanazaran-tena ity dia manaporofo fa mihaino azy ireo ianao ary miaiky ny zavatra tsapan'izy ireo.
Mety ho toa sarotra tamin'ny voalohany, nefa aza manidina foana mba hiarovanao ny zavatra nataonao. Miandry am-pitoniana mandra-pahavitan'izy ireo ary jereo raha mbola mahatsapa ianao fa mila manamarina izay nolazainao na nataonao.
Mety ho hafa ny fahitanao ny zavatra, koa mandehana amin'ny saina malalaka.
Aza adino fa tsy fitsapana io - olona roa mifankatia sy te hampandeha ny fifandraisan'izy ireo.
Ezaka ekipa izany.
6. Mametraha tanjona
Rehefa avy niresaka ny zava-drehetra ianao dia tokony hiasa amin'ny fametrahana azy tanjona amin'ny fiarahanareo .
Ireo dia mety ho generic be, amin'ny resaka fifanomezana toerana kely kokoa raha ilaina izany, na mety momba ny fitondrantenanareo roa tonta izy ireo.
Iaraho miaraka ireo ary makà fotoana handalovana tsara.
Mahaiza mandanjalanja - ary tsy hisy ianareo olona tonga lafatra izay tsy manao na inona na inona mety hanelingelina ny hafa.
Zava-dehibe ny fitazonana ireo zavatra mifandraika amin'ny karazany roa amin'ny toetranao sy ny fomba fifandraisanao.
Mikendry ny fomba vaovao kokoa sy mahasalama kokoa amin'ny fampitana ny fihetseham-ponao fa tsy miady.
Azonao atao ny manomboka mampiasa teny kaody rehefa miha somary mahery vaika ny raharaha, ampahafantaro ny olon-tianao fa te hiala fotoana ianao alohan'ny hahasosotra ny raharaha.
Mitadiava fomba mety aminao ary aza matahotra miresaka momba ny fiasan'izy ireo na tsia.
Ny teboka iray amin'ny fametrahana ireo tanjona ireo dia manampy anao hiasa amina vahaolana sy fifandraisana tsara kokoa amin'ny ankapobeny.
Ny filazanao fa hanonitra dia milamina daholo, saingy mila samy maka antoka ianao fa manolo-tena amin'izany.
Mifandraisa amin'ity dia ity dia ho hitanao fa manakaiky kokoa ianao ary hihamafy ny fifandraisanareo.
Na dia manana zavatra manokana iasanao aza ianao dia mbola afaka miara-miasa.
Ny fitiavana olona dia fanekena azy ireo ary ny faniriana azy ireo hanao soa, noho izany dia fomba tsara iray hanohizana ny fanatanterahana ireo fahatsapana fitiavana ireo.
Mazava ho azy, zava-dehibe ihany koa ny fitazomana ny tenanao ho tompon'andraikitra amin'izay nolazainao fa hataonao.
Tsarovy ny zava-kendrenao ary lazao hatrany amin'ny tenanao fa mendrika izany.
Raha zatra manana tohan-kevitra vitsivitsy ianao dia mety hahatsapa hafahafa sy saika miharatsy kokoa rehefa tsy misy fipoahana na fampandrenesana goavambe!
Ho zatra haingana sy haingana kokoa amin'ity dinika vaovao sy mahasalama ity ianao ary ho tianao amin'ny farany.
Miorina amin'ny fisokafan-tsaina rehefa miasa amin'ny alàlan'ny olana misy amin'ny reninao amin'ny fomba vaovao.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa na inona na inona nataonao teo aloha dia tsy niasa, izany no mahatonga anao miasa amin'ny fomba hafa.
Raha mila valiny vaovao ianao (toy ny tohan-kevitra sy ady hevitra vitsivitsy!), Mila manandrana fomba fiasa vaovao ianao ary mifikira amin'izany.
8. Ilaina ny fifandraisana
Ampitao ny zavatra tsapanao, satria toa samy mitolona amin'ny zavatra mitovy amin'izany ianao.
ny fomba mikarakara intsony izay olon-kafa mihevitra
Hanampy anao roa hisoroka ny zavatra mangotraka indray izany.
Raha tokony hofenoina ny adin-tsainao, na ny momba azy manokana na ny tanjona vaovao napetrakao dia tokony hiresaka izany ianao.
Ity dia fomba mahomby hiasa amin'ny vokatra tadiavinao roa.
Ampahatsiahivo indray ny tenanao fa mifikitra amin'izany ianao satria mifankatia ary afaka mamakivaky ireo faritra sarotra.
Ataovy loha laharana ny fifandraisana amin'ny fisorohana ny fihetsika fantatrao fa hanomboka ady.
Fa aza tonga maritiora izay tsy mahita ny sakaizany mihitsy na manitsaka takelaka atody foana, satria vao mainka hiharatsy izany dia ho ory ianao!
Zava-dehibe ny tsy fanaovana zavatra tafahoatra loatra amin'ny fiezahana hanatsara ny toe-javatra, satria mety hiafara amin'ny lolompo ny namanao ianao.
Alao an-tsaina hoe misakafo ianao - ny mampihena ny sakafo tsy mahasalama ary ny fanaovana fanatanjahan-tena bebe kokoa dia mitovy amin'ny fisorohana toe-javatra izay hiteraka ady sy fandaniana fotoana milamina kokoa miaraka.
Raha nanapa-kevitra ny hiala tanteraka ny karbao ianao (ny mitovy amin'ny mandany fotoana miaraka amin'ny namanao, ohatra), dia hiafara amin'ny fahatezerana, sorena, ary ho tezitra amin'izay nanolo-kevitra anao hanao izany voalohany!
9. Mifikitra eo
Ny fikirizana dia tena fanalahidy raha te hijanona tsy hiady hevitra amin'ny fifandraisanareo ianao.
Mety misy zavatra sasany izay voavaha haingana be (raha toa ka mifototra amin'ny fihetsika mora sy tsy manimba ny fanovana, ohatra, ny ady), fa ny sasany kosa haka fotoana kely.
Mandritra io dingana io dia zava-dehibe izany asehoy ny fanajana ny vadinao ary ataovy mazava fa vonona ianao, ary tena faly, manolo-tena amin'izany.
Faritany tsy misy sarintany io ary samy mahatsiaro ho matahotra ianao satria mety hampidi-doza ny fifandraisanareo.
Samy miaraka amin'ity ianareo ary hahazo ny alalan ' izany miaraka.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ireo adinao rehetra amin'ny fiarahanareo? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
iza no hiverina any wwe
Tsy misy fitiavana ahy na inona na inona
rehefa bandy miantso anao tsara tarehy inona no dikan'izany
inona no dikan'ny hoe mahafatifaty amin'ny lehilahy iray
ny fomba hiatrehana ny freaks fanaraha-maso
inona no hatao rehefa tianao bandy roa